I-Itch.io: Imakethe evulekile yemidlalo yevidiyo ngokusekelwa kwe-GNU / Linux | Kusuka kuLinux
Eqhubeka nendikimba yokuthi Imidlalo ewusizo, izinhlelo zokusebenza kanye / noma amapulatifomu wevidiyo ku-GNU / Linux, ukuqinisekisa nokukhombisa ukuthi i- Izinhlelo Zokusebenza Ezimahhala Nezivulekile kungaba futhi kuhle, kuhle, njengabanye ngale njongo, sizobhekana nodaba lwe Itch.io.
Impela namanje I-GNU / Linux kungaba ngemuva IWindows noma iMacOS kwezinye izici, kepha lokhu kuvame ukubangelwa ukungabi nentshisekelo kwezimboni zomkhakha wezobuchwepheshe noma wezohwebo, njenge imidlalo yevidiyo, hhayi ukukhawulelwa kwezobuchwepheshe kwalokhu esikuthandayo I-GNU / Linux noma ukuntuleka kokwesekwa okuvela ku- Umphakathi wabathuthukisi noma abasebenzisi. Futhi noma kunjalo, okwamanje Windows hlala ungumbusi ongenakuphikwa kule ndawo, kuyiqiniso futhi ukuthi I-GNU / Linux Ihambe ibanga elide kule ndawo.
Isibonelo, ku KusukaLinux sikhulume kakhulu ngakho I-Steam, kanye kudala mayelana Lutris futhi muva nje mayelana I-GameHub. Manje sekuwukujika kolunye uhlelo lokusebenza olukhulu lokudlala olubizwa Itch.io.
Ukucaphuna abadali bayo ku- Iwebhusayithi esemthethweni:
"I-Itch.io iyimakethe evulekile yabadali bedijithali abazimele abagxile emidlalweni yevidiyo ezimele. Kuyisiteji esivumela noma ngubani ukuthi athengise okuqukethwe akwenzile. Njengomthengisi, nguwe ophethe ukuthi kwenziwa kanjani: usetha inani, wenza ukuthengisa futhi udizayine amakhasi akho. Awudingi ukuthola amavoti, ukuthandwa, noma ukulandela ukuze okuqukethwe kwakho kuvunyelwe, futhi ungenza izinguquko endleleni owabela ngayo umsebenzi wakho kaningi ngendlela othanda ngayo. I-itch.io futhi iqoqo lezinto ezihlukile kakhulu, ezithakazelisayo, nezizimele ozothola kuwebhu. Asisona isitolo esijwayelekile sedijithali, esinokuqukethwe okubanzi okukhokhelwe nokumahhala, sikukhuthaza ukuthi ubheke okuzungezile ubone ukuthi utholani".
1.1 Izici zepulatifomu
1.2 Ukufaka Isicelo
1.3 Izithombe-skrini Zokusebenza
2 Ezinye izindlela zokusebenzisa i-Ich.io
2.1 Ku-GNU / Linux noma ama-Multiplatform
2.2 Mayelana neWindows
Inika abadali amathuluzi okwenza izinqumo ezihlakaniphile mayelana nokuthi ukusabalalisa kanjani okuqukethwe kwabo. Abadali banokufinyelela ekuhlaziyweni okuningiliziwe nokuthi abantu bakuthola kanjani, bakulande noma bakukhiqize kabusha abakudalile. Inikeza ukufinyelela okulula kwedatha emithwalweni ezwakalisa kakhulu noma izixhumanisi eziheha ukunakwa kakhulu.
Kwenza kube lula kubadali ukuqoqa imali yendalo yabo ngendlela engavimbi. Akunandaba ukuthi iphrojekthi inkulu noma incane kangakanani, inqubo ihlale iqondile kubalandeli ukunikela noma ukukhokha lokho abacabanga ukuthi kulungile.
Kusungula ukuthi konke ukuthenga neminikelo kukhokhwa ngaphezu kwenani eliphansi. Kodwa-ke, inani eliphansi lingasethwa ku-zero (mahhala), kepha kungenzeka ukuthi abalandeli bakhethe ukuxhasa umdali uma bekuthanda abakunikezayo.
Ixhasa uku-oda kwangaphambilini, ukuthengisa imivuzo, ukudala ukufinyelela kwangaphambi kwesikhathi, ukuhlanganisa okuqukethwe kwakho, nokubuyiselwa kwemali kwabantu abaningi ngezinhloso zephrojekthi.
Landa uhlelo lweLinux kufayela lakho le- Landa Isigaba.
Ukwenza nge-Terminal (Console) kwephakeji elandiwe etholakala ku- Landa ifolda, usebenzisa umyalo: chmod +x Descarga/itch-setup && Descargas/itch-setup.
Lindela lonke uhlelo lokusebenza ukuthi lulandwe futhi lwenziwe ngokulandela isikhombimsebenzisi sokubhalisa.
Bhalisa epulatifomu noma ungene ngemvume nge-akhawunti yethu yamanje yomsebenzisi.
Kusukela manje kuqhubeke singahlola yonke ipulatifomu, futhi sithenge futhi / noma silande imidlalo yayo etholakalayo.
Note: Kubalulekile ukukhumbula ukuthi inakho imidlalo eminingi yamahhala ye-GNU / Linux lokho kungabukwa, kulandwe futhi kudlalwe ngaphandle kwenkinga, ukuwafinyelela ngokukhetha ilebula «Amageyimu we-Linux".
Ezinye izindlela zokusebenzisa i-Ich.io
Ku-GNU / Linux noma ama-Multiplatform
Ngamafuphi, singayazisa kanjani i- Izinhlelo Zokusebenza ze-GNU / Linux okwamanje ngokuphelele evumelekile noma efanelekile ukudlala, imidlalo yehlukile izimfanelo zokuqhafaza namazinga odumo, noma ukunikezwa okutholakalayo akukukhulu njengase- Windows.
Kepha, ikhathalogi yamanje akuyona enkulu kakhulu kuphela kepha iyaqhubeka nokukhula ngosuku ngalunye oludlulayo, ku- ubuningi nekhwalithi. Futhi ngenkathi, isabelo semakethe se I-GNU / Linux kule ndawo, okuningi izinkampani nabathuthukisi sizoba nentshisekelo kungxenyekazi yethu enhle kakhulu I-GNU / Linux imikhiqizo yakho.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Itch.io», enye ipulatifomu evulekile eku-inthanethi nohlelo lokusebenza lwe imidlalo, ezentengiso nezamahhala, mahhala futhi evulekile, ngenxa I-GNU / Linux namanye amapulatifomu wesistimu yokusebenza, anentshisekelo enkulu nokusetshenziswa, kwawo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Itch.io: Imakethe evulekile yemidlalo yevidiyo ngokusekelwa kwe-GNU / Linux
I-Museeks, isidlali somculo se-multiplatform esakhiwe ku-electron